တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများ ပေါင်းစည်းရေး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရေးအလားအလာ – Federal Journal
တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများ ပေါင်းစည်းရေး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရေးအလားအလာ
၂၀၁၈ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွင် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုများအတွင်းသေ ဘာထားမတူညီမှုများ အထုက်အလျောက်ရှိခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၏ ပေးထားချက်ကို လက်ခံနိုင်သည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲလမ်းစဉ်ကိုပယ်ချသည့် အုပ်စုနှင့် ဖွင့်ထား သည့်တံခါးထဲကနေတိုးဝင်ပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်းနိုင်ငံရေး နယ်ပယ်ကိုချဲ့ယူသွားမည်ဆိုသည့် အုပ်စု ဖြစ်သည်။ ဤသို့သဘောထားခြင်းကွဲပြားနေမှုကြောင့် တိုင်းရင်းသားအခြေပြုနိုင်ငံရေးပါတီကွဲများပေါ် ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုများအကြား အခြားသောသေ ဘာထားမတူညီမှုများလည်း အနည်းနှင့်အများရှိနိုင်သေးကြောင်း ပါတီကွဲများစွာပေါ်ပေါက်နေခြင်းက ငြင်းမရသောသက်သေပင်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းတွင် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၏ မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲ/သဘောထားအပြောင်းအလဲကို လူမျိုးတူပါတီများအချင်းချင်းပေါင်းစည်း ရန် ကြိုးစားလာခြင်းနှင့် အချို့ဆိုလျှင် အောင်အောင်မြင်မြင်ပေါင်းစည်းလာနိုင်ခြင်းအားဖြင့် မြင်ရမည်ြ ဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပြောင်းလဲလာခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရေး(ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေး နှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်း ချမ်းရေး)အပေါ် မည်မျှအထိသက်ရောက်နိုင်ကြောင်း ကရင်နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းေ ဆာင် မန်းအောင်ပြည်စိုး နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
မေး။ ။ ၂၀၁၈ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ အချင်းချင်း ပေါင်း စည်းဖို့ ကြိုးစားလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ- ကချင်ပါတီအချင်းချင်း၊ ကရင်ဆိုရင် ကရင်ပါတီ အချင်း ချင်းပေါ့၊ အဲဒီလို တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ ပေါင်းစည်းရေးလုပ်လာတာဘာရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိနိုင်ပါသလဲ . . ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံရေးပါတီထောင်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံ့အာဏာကိုလိုချင်လို့ပါ။ အာဏာဆိုတာ လုပ် ပိုင်ခွင့်ရဖို့ပေါ။ ဒီလိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီနည်းအရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ လူထုထောက်ခံမှု အပြည့်အဝအရဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒီဟာကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တိုင်းရင်း သားပါတီ တွေ အထိုက်အလျောက်အောင်မြင်မှုရခဲ့ပေမဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကျတော့ထင်သ လောက်အောင်မြင်မှု မရဘူး။ အဲဒီမှာ ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကရော၊ မဲဆန္ဒရှင်ပြည် သူတွေဘက် ကရော ဘာကိုတွေ့ကြသလဲ ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ တကွဲတပြဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သွားတွေ့ ရတယ်။ ဒီလိုတကွဲတပြားဖြစ်နေတာက မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ ရွေးချယ်ရခက်တယ်။ တစ်စုတစ်စည်း ဖြစ်မှ အောင်မြင်မှုရမယ်။ အဲဒီတွန်းအားလေးပေါ့၊ နောက်တစ်ချက်ကလည်း အခု NLD အစိုးရက လည်း သူတို့ကတိကဝတ်တွေကို အကုန်လုံးအကောင်အထည်မဖော်နိုင်တာတွေ့ရတယ်။ ဒီတော့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကျရင် NLD ကလည်း တောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်တာမျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ အဲဒီမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့ အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုရင် တစ်ခုတစ်စည်း တည်းဖြစ်ဖို့လိုလာ ပြီဆိုတာတွေ့ လာရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပါတီတွေပေါင်းဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့။
မေး။ ။ နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာ နိုင်ငံရေးမူဝါဒတူရာစုစည်းကြတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူမျိုးတူပေမဲ့ နိုင်ငံရေးအရ နှစ်ပါတီ၊ သုံးပါတီဖြစ်ပြီးနောက် ပြန်ပေါင်းရတာဆိုတော့ အခက်အခဲ၊ အဟန့်အတားရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆရာ့အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီ တွေပေါင်းစည်းရေးမှာ အဟန့်အ တားဖြစ်နေ တဲ့ အဓိကစိန်ခေါ်ချက်က ဘာများဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီဟာကျတော့ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာပေါ့လေ။ ကျွန်တော့အမြင်ကတော့ ကျွန်တော်က ကရင်ဆိုတော့ ကရင်နိုင်ငံရေး.ပါတီတွေဘက်က နည်းနည်းပြောချင်တယ်။ ကရင်တွေက ကရင်ပြည် နယ် တစ်ခုတည်းမှာပဲ နေထိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ ဆိုလိုတာက ကရင်ပြည်နယ် ပြင်ပနေရာ အနှံ့မှာနေ ထိုင်ကြ တယ်။ ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန်၊ ပဲခူး၊ မွန်၊ တနင်္သာရီ၊ ကယားတွေမှာ ပြန့်ကျဲနေထိုင်ကြတာဖြစ် တော့ နေရာဒေသ ကွဲပြားမှုကြောင့် ပေါင်းစည်းဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေတယ်။ ကရင်ပါတီတွေဆိုပြီးတော့ (၆)ပါတီရှိတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ပါတီက(၄)ပါတီ၊ ကရင်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာ(၂)ပါတီ ဆိုတဲ့အခါ နည်းနည်း အခက်အခဲရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က မူဝါပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားမှုပေါ့။ ဥပမာ -ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ ကရင်ပါတီတွေထဲမှာလည်း အချို့ပါတီတွေက နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းတည် ဆောက်ပုံမှာ အမျိုးသားပြည်နယ် ဆိုပြီးတော့ သွားချင်တယ်။ အချို့ပါတီတွေကျတော့ လက်ရှိအတိုင်း ပြည်နယ်(၇)ပြည်နယ်၊ တိုင်း(၇)တိုင်း နဲ့သွားချင်တယ်။ အဲဒီလိုမတူညီတဲ့အပိုင်းတွေရှိတာပေါ့။ ဆိုတော့စောစောကအမျိုးသားများပြည်နယ်ဆိုပြီး သွားချင်တဲ့အုပ်စုက ဗမာကိုလည်း ပြည်နယ် တစ်ခု အနေနဲ့ ပေးချင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ အဲဒီမှာမူဝါဒပိုင်း မတူတဲ့အခါ ပေါင်းစည်းရေးမှာ အခက်အ ခဲဖြစ်စေတဲ့အချက်ဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ (၂)ချက်ပါပဲ။ နေရာဒေပြန့်ကျဲနေ တာရယ်၊ အခြေခံမူဝါဒမတူညီတာတွေရယ်ပေါ့။
မေး။ ။ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာ အစောဆုံးပေါင်းစည်းတာက ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါ တီတွေပါ။ နောက်ပိုင်း သူတို့ပြန်ကွဲသွားတာတွေ့ရတယ်။ ဆရာတို့ကရင်ပါတီတွေက ဒုတိယအစော ဆုံးပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ရခိုင်ပါတီတွေကြုံတွေ့ရသလိုမျိုး ကရင်ပါတီတွေလည်း ကြုံတွေ့ ရနိုင်သလား။ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုအစီအစီအမံတွေနဲ့ ပါတီကိုထိန်းကျောင်းနေပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း ရခိုင်ဥပမာပေါ့၊ ဒါကို အများကြီးနမူနာယူပါတယ်။ ရခိုင်နိုင်ငံ ရေးပါတီတွေပေါင်းစည်းပြီးနောက် ပြန်ကွဲသွားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့အမြင်ပြောရရင် သူတို့ရဲ့ အခြေခံမူဝါဒမတူညီမှုကြောင့်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ခပ်လွယ်လွယ်ပြောရရင် တိုင်းရင်း သားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ ရဲ့ မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိစ္စပေါ့။ ဒီမှာ ဒေါက်တာအေးမောင် (RNDP) တို့က NBF အုပ်ထဲမှာပါတယ်။ ဦးအေးသာအောင် (ALD)တို့က UNA အုပ်စုထဲမှာပါတယ်။ ဒီတော့ ANP ဆိုပြီး မပေါင်းစည်းခင်မှာ အဲဒီမဟာမိတ်ကိစ္စကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမလုပ်ထားဘဲနဲ့ ပေါင်းစည်း လိုက်တဲ့သေ ဘားပေါ့။ ပေါင်းစည်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း အချို့က NPF အစည်းအဝေးတက်လိုက်၊ အချို့က UNA အစည်းအဝေးတက်လိုက်နဲ့ နောက်ပြန်ကွဲတဲ့အထိ ရောက်သွားတာပဲ။ ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ကရင်ပါတီတွေအနေနဲ့ ရခိုင်ပါတီများ ဥပမာ ကို နမူနာယူပြီးတော့ မပေါင်းစည်းခင်မှာ အခြခံမူလေး တွေချထားတာရှိပါတယ်။ နံပါတ်(၁) အခြေခံမူဝါဒချင်းတူညီသော ပါတီများနှင့် ပူးပေါင်းမည်/ မဟာ မိတ်ဖွဲ့မည်။ (၂) မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း များ၏ လွှမ်းမိုးမှုမရှိစေဘဲ သီးခြားလွတ်လပ်စွာရပ် တည်ရမည်။ အဲဒီမူနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် (၄)ပါတီ ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ ပြည်နယ်ပြင်ပ (၂) ပါတီ KNP,KPP တို့က မပါဝင်နိုင်သေးဘူးပေါ့။ ဒီနေရာမှာလည်း မပေါင်းစည်းနိုင်သေးတဲ့ ပါတီတွေ နဲ့လည်း မဟာမိတ်အနေနဲ့နေဖို့ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းနေဆဲရှိပါတယ်။ နောက် မွန်ပါတီတွေလည်း (၂) ပါတီကနေပေါင်းဖို့လုပ်နေရင်းနဲ့ (၃)ပါတီဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ပြန်ပေါင်းနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ နောက် ကယားပေါ့၊ ဒီမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာက ရခိုင်က ပထမဆုံးပေါင်း စည်းနိုင်ခဲ့သလို ဒုတိယ အစောဆုံးပေါင်းစည်းနိုင်တာ ကျွန်တော်တို့ ကရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမဟုတ်သေး ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ထက် ခပ်စောစောပေါင်စည်းနိုင်တာက ကယားနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါ။ သူတို့က ဒုတိယ အစောဆုံး ပေါင်းစည်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ (၃)ပါတီထဲကနေ (၂)ပါတီပေါင်းစည်းနိုင်တာဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် အခြေစိုက် ကယားပါတီတစ်ခုကတော့ မပေါင်းစည်းနိုင်သေးဘဲ၊ ကျန်နေသေးတယ်။ ပေါင်းစည်း ထားတဲ့ ကယားပါတီက ၂၀၁၇-ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ဒါက စုစည်းနိုင်ခြင်း ရဲ့ရလဒ်တွေပေါ့။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဆိုပြီး သွားနေတယ်။ အဓိက ကရင်ပြည်နယ်တွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်။ မပေါင်းစည်းနိုင်သေးတဲ့ ကျန်နှစ်ပါတီနဲ့လည်း ရွေးကောက်ပွဲမှ ကရင်ပါတီအချင်းချင်းနေရာထပ်မသွားအောင် ညှိနှိုင်းဖို့စီစဉ်နေတုန်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုအစီအမံတွေနဲ့ နောက်ထပ်ပါတီမကွဲအောင် လုပ်ထားတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး။ ။ အခုဆိုရင် တိုင်းရင်းသားပါတီ(၅၅)ခုလောက်ရှိနေပါနယ်။ အဲဒီမှာလည်း မျိုးနွယ်စု အခြေခံ/ဒေသခံပါတီတွေလည်း ရှိကြပါသေးတယ်။ ဥပမာ- ချင်း ZCD(Zomi Congress for Democracy)၊ ACNP (Asho Chin National Party) လိုမျိုး၊ ရှမ်းမှာဆိုရင် အင်းအမျိုးသား ပါတီ၊ ပလောင် အမျိုးသားပါတီ စတာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုပါတီတွေနဲ့ရော နောင်မှာပေါင်းစည်း သွားတယ်လို့ ထင်ပါသ လား . .။
ဖြေ။ ။ အဲဒါကိုပြောရရင် ပေါင်းစည်းဖို့နည်းနည်းခက်မလားမသိဘူး။ အခုလွှတ်တော် ထဲရောက် နေတာ ချင်းမှာဆိုရင် ZCD(Zomi Congress for Democracy) ပေါ့။ သူတို့ဒေသ၊ သူတို့ လူမျိုးစု သီးခြားရပ် တည်နေတဲ့အခါကျတော့ ပေါင်းစည်းဖို့ခက်ကောင်းခက်နိုင်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ကရင်တွေကျတော့ ဒေသကွဲတာနဲ့ လူမျိုးစုကွဲတာတွေနည်းနည်းရှိပေမဲ့ အဲလောက်ပြင်းထန်တာမရှိပါ ဘူး။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ အတွက် အားသာချက်တစ်ခုပေါ့။ ဆိုတော့ မျိုးနွယ်စုအလိုက်၊ ဒေသအလိုက် ထူထောင်ထားတဲ့ပါတီတွေနဲ့ ကျတော့ ပေါင်းစည်းဖို့သိပ်မလွယ်လှဘူးထင်းပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ပိုသိ မှာပေါ့. . (ရယ်လျက်)။
မေး။ ။ ကျွန်တော်သိရသလောက် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစိန် ခေါ်ချက်က “ခင်တို့ပါတီအနိုင်ရရင်လည်း ဗဟိုမှာ အစိုးရမဖွဲ့နိုင်ဘူး”ဆိုတဲ့ ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုပါတီ ပေါင်းစည်းရေးလုပ်နေကြထာကလည်း ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးက အဓိက အစိတ် အပိုင်းဖြစ်မယ်ထင်ပါ တယ်။ ဒီတော့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပေါင်းစည်းထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံ ရေးပါတီတွေရဲ့ မဲဆွယ်စည်း ရုံးရေးသတင်းစကားက ဘာဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ . . ။
ဖြေ။ ။ ဒီဟာကို ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာရှိပါတယ်။ အခု ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD က တောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်တယ်။ ဟုတ်ပြီ၊ နောက် ရခိုင်မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီ အများစုအနိုင်ရ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တော့ NLD အမတ်တွေနဲ့ပဲ ဖွဲ့လိုက်တယ်။ ဗဟိုမှာဆိုရင် NLD ကလွဲရင် ကျန်တဲ့သူတွေက အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတဲ့သဘောလောက်ပဲ ပါတာတွေ့ရ တယ်။ ဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်း ပြန်စဉ်းစားတာကဘာလဲဆိုရင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုး/ပါတီတစ်ခု တည်းဆိုရင် ဗဟို(ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်)မှာ အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသား အားလုံး ပူးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်နိုင်တာပေါ့။ နောက်တစ်ချက်က ပါတီကြီးနှစ်ခုက အစိုးရဖွဲ့နိုင် လောက်တဲ့ အမတ်နေရာမရတဲ့အခါမျိုး၊ ဒီဘက်က တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေကလည်း အတန်အသင့် အနိုင်ရ ခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးတိုင်းရင်းသားပါတီအမတ်တွေနဲ့ ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရလိုမျိုးဖွဲ့ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးလည်း ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့။ နောက်တစ်ခုက ဗဟိုအဆင့် မှာ မဖြစ်နိုင်ရင်တောင် သက်ဆိုင်ရာကိုယ့်ပြည်နယ်အသီး သီးမှာ အစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကရှိ တာပေါ့။ ဗဟိုမှာတော့ အားလုံးပူးပေါင်းမှရနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုး ဖြစ်ပေမဲ့ ပြည်နယ်အဆင့်မှာ တော့ တစ်ပါတီချင်းကအောင်မြင်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီတော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ သင့်တင့်ေ လျာက်ပတ်တဲ့အဖြေတစ်ခုတော့ ထွက်လာနိုင်တာပေါ့။ ရခိုင်ဥပမာပြန်ကြည့်ရင် ကိုယ့်ပြည်နယ်တွင်း မှာ အများစုအနိုင်ရပေမဲ့ NLD ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အစိုးရဖွဲ့လို့မရဘူး။ ဒါက လောလော ဆယ်အခြေ အနေပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အကယ်၍ NLD က ဗဟိုမှာလည်း ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ရ မယ့်အခြေအနေမျိုး ကြုံနေ တဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင် အခုလိုမျိုးဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။ ဒီတော့ အဓိကအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အနေ နဲ့ ကိုယ့်ပြည်နယ်တွင်းမှာ အနိုင်ရအောင်အရင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာက အင်မတနအရေးကြီးလာတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ နောက်တစ်ခုက တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါင်းစည်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲအောင် နိုင်ရေး မျှော်မှန်ချက် ထားရတာဟာအခုဆွေးနွေးနေဆဲ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁-ရာစုပင်လုံ) မှာ ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်နိုင်ရေးနဲ့လည်း ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ထင်ပါသလား . . ။
ဖြေ။ ။ သိပ်ရှိတာပေါ့၊ သိပ်ရှိတာပေါ့။ NCA ရဲ့ ၂၂(ဃ)မှာ တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေထက် ရောက်ခွင့်ရှိတယ်လို့ အရင်ကပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့ NLD အစိုးရတက်ပြီးနောက်ပိုင်း တရားဝင်နိုင်ငံရေး ပါတီ ဆိုတဲ့စကားရပ်အစား ရွေးကော်ပွဲအနိုင်ရပါနီလို့ ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ် ငန်းစဉ် ထဲကနေ ပထုတ်ခံရသလိုဖြစ်နေထာပေါ့။ ညီလာခံတက်ရောက်ခွင့်ရှိတာ (၂၂)ပါတီပဲရှိတော့ တယ်။ ပါတီရှိ တာက(၁၀၀)ကျော်တယ်။ ဒီဟာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံ မပါဘူးဖြစ်နေတော့ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ပြောပြောနေ တဲ့ အားလုံးပါဝင်ရေး (ALL Inclusive) နဲ့လည်း ဆန့်ကျင်နေတယ်ပေါ့။ တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်(၁၀)ဖွဲ့ လက်မှတ်ထိုးတယ်၊ ကျန်အဖွဲ့တွေ လက်မှတ်မထိုးသေးတော့ ငြိမ်း ချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်က အောင်မြင်တယ် လို့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့။ ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်း သားနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်း အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတော့ ဒီကိစ္စက ပါတီတွေပေါင်းစည်းရ တာလည်း ဒါနဲ့အများကြီးသက်ဆုင်ပါတယ်။
မေး။ ။ တိုင်းရင်းသားပါတီအချင်းချင်း ပေါင်းစည်းလာတဲ့နောက်မှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့ မဟာ မိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ UNA (Union Nationalities Alliance)နဲ့ NBF (Nationalities Brotherhood Federation) တို့ရဲ့ အခင်းအကျင်းကရော ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင် သလဲ . . ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ပါတီက အရင်က NBF မဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်။ အခုပါတီတွေ ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ NBF မှာပါမလား။ UNA မှာပါမလားဆိုတား လေ့လာဆဲအခြေအနေ မှာရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့မှာပါမှာပေါ့။ အရင် ကျွန်တော်တို့ NBF မှာရှိတုန်းက တိုင်း ရင်းသားပါတီတွေ အခုလိုမျိုး မဟာမိတ်(၂)ဖွဲ့ဖြစ်နေတာမကောင်းဘူး၊ ဒီတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းရအောင်ဆိုပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဆိုပြုတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ UNA ဘက်ကိုလည်း ကမ်းလှမ်းခဲ့တာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုဘက်ကတုံ့ပြန်တာမျိုးမရှိဘူး။ ဒီတော့ အခုထိ ဒီအတိုင်းရှိနေ တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဖြစ်တန်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမပေါင်းနိုင်ရင် အင် အားမကြီးနိုင်ဘူး။ UNA မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ NBF မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်အားကြီးအုပ်စုရဲ့သဘောထားတွေ ပြောင်းလဲဖို့လည်းလိုအပ်တာကိုး။ အခုနောက်ပိုင်း အဲဒီအင်အားစုတွေထဲမှာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အပြောင်းအလဲရှိမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်းကြားနေရတယ်။ ဒီတော့အခုနပြောတဲ့ တိုင်းရင်း သားနိုင်ငံရေးပါတီ မဟာမိတ်အခင်းအကျင်းကလည်း တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ် သွားနိုင်တာပေါ့လေ။ ဒီလိုပူးပေါင်းနိုင်ရင်တောင်မှ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်အုပ်စုကို အနည်းယှဉ်ရ မယ့်အနေအ ထားရှိတယ်ပေါ့။ ဒီတော့ နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်တယ်လို့လဲ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ပေါင်းစည်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကောင်းခဲ့ မယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲအလွန် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကို ဘယ်လောက်အထိ ရိုက်ခတ်ပြောင်း လဲစေ နိုင်ပါသလဲ . .။
ဖြေ။ ။ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မျှော်မှန်းသလောက်အနိုင်ရ တယ်ဆိုပါတော့။ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကိုင ဘယ်လောက်အထိ ရိုက်ခတ်နိုင်သလဲဆိုရင် ကျွန်ေ တာ့် အမြင်ပေါ့နော်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အထိုက်အလျောက်အထောက်အကူပြုမယ်။ ဆိုလို တာက တိုင်းရင်းသားတွေရင်ထခဲ အနှစ်နှစ်အလလခံစားနေတဲ့ ခံစားချက်တွေကို လွှတ်တော်တွင်း ကနေ လွှတ်တော်ကိုယ်းစားလှယ်တွေက ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မယ်။ နောက်ပြီး အဓိကနိုင်ရေးအင် အားစုတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ နေရာမှာလည်း တစ်စုံတစ်ခုသော အတိုင်းအတာအထိ အောင်မြင်မှုရလာနိုင် တာပေါ့။ ဒီတော့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် အကျိုးရှိလာနိုင်တာပေါ့လေ။ အခုဆိုရင်လည်း အရင်က တည်းကနေ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမတိုင်ခင်အထိ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေး နွေးပွဲတွေရှိလာခဲ့ပြီဆိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တိုက်သင့်တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရ လာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပေါ့လေ။
မေး။ ။ ဆရာတို့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ အားကောင်းလာတာနဲ့အမျှ ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်နေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးနဲ့ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တို့ရဲ့ အနေအထားကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပေးပါ။
ဖြေ။ ။ အင်း . . . ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရအောင်ဆိုပြီး ကျွန်တော် တို့ ပြောလာခဲ့တာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်ထိတော့ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေး ဘူးပေါ့လေ။ ဒီမိုကရေစီကိုတဖွဖွပြောလာတဲ့ အခု NLD အစိုးရအထိပေါ့။ အလားတူပဲ ပြည်သူတွေ လိုလားတောင့်တနေ တဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာလည်း အကောင်အထည်မဖော်ဆောင်နိုင် သေးဘူး။ ဒီတော့ ၂၀၂၀မှာ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ အထိုက်အလျောက်နေရာရလာရင် အခုထက်ရုပ်လုံးပေါ်လာမလားပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒါက ယတိပြတ်ပြောဖို့ခက်တဲ့ကိစ္စပါ။ လက်ရှိအနေ အထားအပေါ် ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် ငြိမ်းချမ်းရေးက ဝေဝါးတုန်းပဲလို့ ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲ။ ဒါက လည်း သူဟာအချိတ်အဆက်ရှိတယ်။ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုမတည်ဆောက်နိုင်သရွေ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ အလှမ်းဝေးနေဦးမှာပဲ။ ဘာလို့လဲဆို တန်းတူခြင်း၊ ညီမျှခြင်း၊ လွတ် လပ်ခြင်းဆိုတာ ဖက်ဒရယ်၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ စနစ်ကနေလာ တာကိုး . . . ။ စောစောကပြောသလို တိုင်းရင်းသားတွေ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကျယ်လာမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့မျှော်မှန်းထားတာနဲ့ ပိုမိုနီး လာနိုင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ထပ်မံဖြည့်စွက်ချင်တာများရှိရင် ပြောကြားပေးပါ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကိုပေါ့။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေး ပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေကို ပြောချင်တာရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား(မိမိအတ္တ)ကို ခပ်ဝေးဝေးစေချင် တယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအရေး၊ တိုင်းရင်းသားတစ်ရပ်လုံးအရေး ဆောင်ရွက်စေချင်တယ်။ ဒီနေရာမှာ တိုင်းရင်းသားဆိုရင် ဗမာတွေလည်းပါပါတယ်။ သူတို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံထဲက တိုင်းရင်းသားတစ်မျိုး ပဲလေ။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ဘယ်ဟာမှန်၊ ဘယ်ဟာမှားဆိုတာ ချိန်ဆပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ကရင်တွေ NCA လက်မှတ်ထိုးလို့ ကချင်တွေလည်းထိုးရမယ်မဆိုလိုဘူးပေါ့။ ကိုယ့်အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား၊ တိုင်းရင်းသားတစ်ရပ်လုံး အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပြီး ချိန်ဆပေါ့။ နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းကို စာပွဲပေါ်မှာဖြေရှင်းမလား၊ ဒါမှမဟုတ် လက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းမလားဆိုတာ အားလုံး ဝိုင်းပြီးအဖြေရှာကြပေါ့။ ကျွန်တော်ို့ ကရင်ခေါင်းဆောင်ကြီးစောဘဦးပြောတဲ့ “ကရင်လက်နက် ကရင် လက်မှာရှိရမယ်”ဆိုတာတော့ အခုထိမှန်နေတုန်းပဲ(ရယ်လျက်)။ ဒီတော့ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာမို့လို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ သတိကြီးကြီးနဲ့ ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ ပြောလိုပါတယ်။
(စောမြအောင် – ဆက်သွယ်မေးမြန်းသည်)